काली बुढीको घर पुग्दा यस्तो सम्म देखियो, अभिनयले बनायो करोडौको मालिक ! -हेर्नुहोस(भिडियो सहित ) – Ap Nepal
December 20, 2021 116
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी निकै चर्चित कलाकार हुन् शारदा गिरी अर्थात काली बुढी ।चलचित्र,टेलिसिरियल बाट काली बूढी पात्रको चर्चा चुलियो।चलचित्र ‘छक्का पन्जा’बाट काली बूढी पात्रको चर्चा चुलियो। माग्ने बूढाको आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी ती ‘काली बूढी’ शारदा गिरी हुन
गिरीलाई अहिले पनि बाटोमा हिड्दा ‘काली बूढी’ भनेर बोलाउँछन् भने केहीले ‘तपाईंको छोरा माग्ने बूढा होइन ? भनेर सोध्छन्। उनलाई दर्शकले ‘काली बूढी’ भनेर बोलाउंदा समेत खुशी लाग्छ। उनका अनुसार, यो उनको सफलता हो।शारदाका छोरा, छोरी तथा ज्वाईंले समेत उनका चलचित्र हेर्ने गर्छन् र उनको अभिनय क्षमता प्रति गर्व गर्छन् ।तर, उनका कुनै पनि सन्तान कलाकारितामा छैनन् ।
उनको घरमा पुग्दा उनी निकै राम्री भएर बसेकी छिन् । भरखर सानदार नयाँ घर बनाएकी काली बुढीले हामिलाई आफ्नो घर सबै देखाइन् । उनको घर हेर्दा निकै आकर्षक देखियो । अहिले उनि ले आफ्नै युटुब च्यानल खोलेर सिरियल उत्पादन गर्न थालेकी छन्, यसती क्रम मा उन्को घर मै पत्रकार पुग्दा यस्तो रमाईलो भयो ।
Prevएकैपटक त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५ जना बङ्गलादेशी पक्राउ,संङ्का लागेर झोला हेर्दा छक्क पर्यो प्रहरी
Nextकल रेकर्ड सहित अर्जुन दासको बहिनी र आमा मिडियामा ,बहिनी रूदै भन्छिन् मेरो दाईको एउटा आँखा पनि नदेख्ने उपचेर गराउन जाने सल्लाह थियो तर… (भिडियो सहित)